कुन बाटाेमा छ ? नेपालकाे कृषि - उब्जनी
कुन बाटाेमा छ ? नेपालकाे कृषि
२०७७ आश्विन ७, बुधबार ०१:१२
कृषि क्षेत्रमा बढ्दाे परनिर्भरता र काेभिडकाे कारण स्वदेश फर्किएका युवाकाे कारण अब कृषि नयाँ दिशामा माेडिन्छ भन्नेहरू भेटिए । एक गाँस खानकाे लागि , परिवार पाल्नकाे लागि भारत जानेहरूकाे लर्काेले नेपाली बाँझाे माटाेलाइ गिज्जाइरहेकाे छ। याे बिचमा कृषि उद्दमि पवन गाेल्यानसँग गरिएकाे कुराकानिकाे अंश पठ्नुहाेस्।
–Onlinekhabar बाट साभार गरिएकाे
कृषकलाइ लकडाउन लागे देशमा अर्काे महामारी आउँछ
‘विश्वासमा धाेका भयाे’ : मन्त्री भुसाल